ငါ့နှလုံးသားတွေ တုန်ရီနေတယ် | Ko Rohingya
သမိုင်းမျက်ရည်၊ ကျနေတာကို မြင်ရတာမို့၊
This entry was posted on February 6, 2013, in ကဗျာ and tagged ကဗျာ, ချမ်းမြေ့, တိုင်းရင်းသား, ဓာတုသိန်းစိန်, ဗိုလ်နေ၀င်း, ရခိုင်, ရခိုင်ဘုန်းကြီး, ရခိုင်အကြမ်းဖက်သမား, ရိုဟင်ဂျာ, လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုကြီး, သားသတ်သမား, အစ္စလာမ်, တောင်ကုတ်လူသတ်မှုကြီး, မြန်မာ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← မြေခွေးတို့အကြံ ဒို့တွန်းလှန်မယ်	အဖိနှိပ်ခံမျက်ဝန်းက မျက်ရည်စများ →